Igwe na-agbawa agbawa maka nhazi igwe, profaịlụ na akụkụ nhazi
Mgbawa agbawa ihicha nke profaịlụ elu nke dị iche iche structural akụkụ
Igwe na-ebufe ụdị ihe mgbawa ọkụ maka H beam
A na-ejikarị arụ ọrụ nchara, petrochemical, igwe na-ebuli elu na igwe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbawa ihicha.
Igwe na-ebufe ụdị ihe mgbawa ọkụ
Q69 Series Na-aga n'ihu Roller conveyor Steel Plate Shot Blasting Machine
┃ Product Description Okwu Mmalite maka Roller conveyor shot blasting igwe Roller pass type shot blasting machine nwere ike ihicha ígwè efere na square ígwè, flat steel, steel plate na iche iche structural akụkụ na ezi uche size n'otu oge.Ọ nwere ike ọ bụghị naanị iwepu nchara n'elu workpiece, hichaa slag ịgbado ọkụ n'akụkụ akụkụ ahụ, kamakwa wepụ nrụgide ịgbado ọkụ nke workpiece, melite ike ike ọgwụgwụ nke workpiece, na-abawanye adhesion nke th ...
Site n'ụdị igwe na-agbawa agbawa maka ịgbasa nchara nchara
Site n'ụdị igwe na-agbawa agbawa maka nrụsipụta igwe anaghị agba nchara
Nke a ụdị ogbugba ogbugba igwe a na-akpọ site ụdị ogbugba ogbugba igwe, eji maka ígwè efere.Ọ nwere ike iwusi usoro nke efere ígwè ike.
Igwe a na-etinye aka na-ehicha nchara na eserese n'elu efere ígwè, akụkụ ígwè na nhazi ígwè na mbupu, ụgbọ ala, ọgba tum tum, akwa na ụlọ ọrụ igwe.
Na akpaghị aka Ahorizontal H Beam Rust Wepụ igwe na-agbawa agbawa
A na-eji igwe na-agba agba agba agba maka nnukwu ígwè dị ka ígwè dị nchara H, efere ígwè, wdg. Ọ nwere ike wepụ nchara, akpụkpọ anụ oxide, slag welding, agba n'efu na ihe ndị ọzọ.
Q69 Site na ụdị Shot gbawara igwe maka Aluminom anwụ nkedo workpieces
Q69 Site n'ụdị igwe na-agbawa agbawa maka Aluminom anwụ nkedo
Site ụdị ogbugba ogbugba igwe nwere ike iji aluminum anwụ nkedo, ọ nwere ike wepụ nchara, oxide akpụkpọ, ịgbado ọkụ slag, n'efu agba na na.
Igwe ihe nchọta fotoelectric na igwe na-agba agba ígwè nke a na-eji ihicha nchara n'elu nchara nchara.
Q69 Na-agafe Ụdị Igwe na-agbawa agbawa maka ọgwụgwọ elu igwe nke ngalaba
Q69 Na-agafe Ụdị Shot Blasting Machine maka Ngalaba Steel Surface Ọgwụgwọ bụ mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe na nkwalite, ngwaahịa ahụ eruola ọkwa dị elu na China.
Nkà na ụzụ na-agbawa ájá ejirila ọnọdụ dị mkpa na-arịwanye elu na teknụzụ ọgwụgwọ elu nke profaịlụ aluminom, nke na-anọchite anya mmepe mmepe nke profaịlụ aluminom nke oge a.
Mgbe sandblasting gachara, profaịlụ nwere ike wepu ntụpọ nke ọka n'ibu, ahịrị ịgbado ọkụ, ọka na-enweghị isi na ihe ndị ọzọ, wee kwado teknụzụ ọgwụgwọ oxidation agba, ọ nwere ike hazie profaịlụ ya na nchapụta dị iche iche na agba nke elu ájá, ọ nwekwara ike. nweta mmetụta mmetụta siri ike ma ọ bụ nke ọma metal site n'ịhọrọ ogbunigwe nchara na nha nha dị iche iche.
Q69 Series Steel Plate na Profaịlụ ngalaba Steel Shot gbawara igwe
Na akpaghị aka H Beam Rust Wepu igwe na-agbawa agbawa
Q69 usoro ogbugba ogbugba igwe na-eji maka nnukwu ígwè dị ka H-ekara ígwè, ígwè efere, wdg Ọ nwere ike wepụ nchara, na oxide akpụkpọ, ịgbado ọkụ slag, na n'efu agba na na.
Hook Polisher Abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị mgbawa, Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Nko abụọ Abrator, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, abrator, Ngwaahịa niile